Izindlu ezingama-House 5 amagumbi angama-220 M2 athengiswa uJuan Les Izikhonkwane
Real Estate Listings: » Residential homes » Houses » FR » Izindlu ezingama-House 5 amagumbi angama-220 M2 athengiswa uJuan Les Izikhonkwane1
Ikhodi Yokuposa: 06160
Izici: Air conditioning, Alarm system, Double glazing, Electric shutters, Security door, Swimming pool, Car port, Sliding windows
Uhlukile .... !!!!!!!! I-villa entsha eyakhiwe ngokwakhiwa endaweni eluhlaza endaweni yokuhlala eseduze kwamabhishi nezitolo. Ukwakhiwa kwekhwalithi ephezulu ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme. Kufaka umnyango omuhle wokungena, igumbi lokuhlala elingama-60 m2, ikhishi elizimele, indlu yamachibi, amakamelo okulala ama-4, izindlu zangasese ezi-3.
I-Villa 160m2 enegadi nethala eJuan Les Izikhonkwane